Kukadzi 2018 - Network maRadio
musha / 2018 / Kukadzi
Mwedzi: February 2018
Kugadzirisa Talkpod N58 Audio kubva kumenu yebasa naG7LEU
Ini pakupedzisira ndinogadzirirwa yakanaka ye media vhoriyamu, Ie iyo inonyanya kukosha nguva zhinji. Muchikamu cheinjiniya menyu odhiyo -> gudzanzwi maitiro -> midhiya ndakaisa level 0 kusvika 160, ndokuwedzera 6 padanho kuitira kuti nhanho 1 ive 166, nhanho 2 iri 172, nezvimwewo. yakaderera vhoriyamu uye ingangoita irinenzwi rakanyanya kune iro rakanyanya vhoriyamu.
Icho chaive chinetso chisina kujairika. Kutanga zvishoma zvishoma kupfuura zana neshanu kwakakonzera kuti nhanho dzese dzive dzakanyanya kurira, uye yakadzika kwazvo kupfuura zana neshanu zvaireva kuti ese mavhoriyamu emazinga aive akanyarara zvakanyanya. Iyo yekugadzika haina kunyatso kuenzana pamatanho ese!
Ongorora: Kuti upinde menyu menyu, dhaya kodhi inotevera kodhi: * # * # 3646633 # * # *
Network maRadio - nzira inoenda kuAmateur Radio?
Kwemamwe makore ikozvino, iyo yekuvaraidza yeAmateur Radio yakatarisana nedambudziko riri kuuya.
Mumazuva ekutanga etekinoroji tekinoroji, Amateur Radio yaive hobho zvakanyanya kune vanoedza, vanhu vari pamucheto wehunyanzvi hwehunyanzvi hweRF tekinoroji. Vakatyora ivhu idzva uye vakagadzira nzira yevanotengesa nevashandisi kuti vashandise zvakanyanya iyo RF spectrum. Zvisingashamisi, vazhinji vekutanga Hams vaibatanidzwa mukuvambwa kwemasangano akadai seBBC.
Kutevera yakakosha mabasa akaitwa neredhiyo vatauri kubva 1939-1945, iyo hobby yakaona post-yehondo bulge muhuwandu, yakawedzerwa nevazhinji vekare-servicemen kubva kwakasiyana maseru regemu.
Munguva iyoyo, chimwe chezvinhu zvinokwezva zveHam Radio kwaive kuvaka uye kuyedza wega michina pamwe nekugona kutaura nevanhu kune rimwe divi repasi. Vazhinji vakajoinha vaive neruzivo mukugadzira zvemagetsi uye mukushandisa Morse Code, saka zvinopinda zvebabby zvaive zvisingaite sezvisingakundiki sezvavakazoonekwa.
Kunopera kwema1950 nema1960 kwakaona kubuda kweJapan HF Radiyo, iyo pachayo yakatanga kubereka kusimuka kweanodaidzwa kunzi "mudziyo wekushandisa", kunyangwe kuvaka dzimba kuchiri kubudirira.
Kukwira kwePirate Radio kwakakurudzira vazhinji kuti vapinde mune zvekuzvivaraidza futi, vamwe nenzira dzinokatyamadza - zvaive zvakajairika kuti nhepfenyuro dzemuno dzeMedium Wave Pirate dzionekwe pamhepo dzichiridza mimhanzi yepop uye vasingazivi vachidzungaira munzvimbo yeAmateur Top Band, kwavakasangana. nemusanganiswa wekushamisika uye kukurudzira kuti "uwane rezinesi rakakodzera!" Vakawanda vakadaro.
Mukupera kwema1970 uye kutanga kwa1980 maCB craze akabatsira kuwedzera kumwe kufarira, pamwe kwakakura kwazvo munhoroondo yekuzvivaraidza, asi zvisina kugamuchirwa nevakawanda vakagadzwa kuti vave vakatendeseka, asi izvo zvakaparara izvozvi zvakare.
Kubva kuma1990 Amateur Radio yanga ichinetseka kuwana kuzivikanwa kwayo, kunyanya mu21st Century yakabatana. Yadonhedza chinodiwa cheMorse, yaita kuti nzira yekupinda bvunzo ipinde mune yekuzvivaraidza "inonaka", asi zvakadaro, vezvenhau vanowanikwa zvirinani, muropa uye internet inotora yakawanda nguva yakasarudzika yevanhu.
Ndiani ari kuuya mune zvekuvaraidza?
Kushaikwa kwevanhu vadiki (uye neizvozvo, tinogona kuverenga vari pasi pe40s!) Vanopinda mune yekuzvivaraidza, pamwe neinoonekwa "kutyisidzira" kweInternet kugona kuzadzisa zvakawanda izvo Radio yaimboita, pamwechete kuronga kuderedza huwandu hwevanhu vanofarira Ham Radio.
Vatsva vanouya pakuzvivaraidza kwedu vanowanzo kuve vanonzi "vasina-nesters" - vanhu vari muma 50s kana kupfuura. Ivo vane iyo nguva (uye nemari!), Ikozvino vana vasiya dendere, kuti vadzokerezve iyo "radio hobby" iyo yavanorangarira asi havana kuzombotamba nekutamba navo mumakore avo eudiki.
Kune vechidiki vashoma futi, asi chandinoona ndechekuti ivo vanonyanya kuve nenhengo yemhuri iyo yatove nemvumo, saka vane rutsigiro, kurudziro uye kazhinji zvigadzirwa, pamba.
Pane zvakawanda nyaya zvine chekuita nekuwana ropa idzva muHam Radio.
Pamwe nyaya hombe nhasi ndeyekuti vanhu havana kusangana ne "mashiripiti" eredhiyo sezvatakaita isu vedu vakuru. Ini ndinogona kurangarira zvakajeka zvishoma nezvishoma ndichiyambuka 31m nhepfenyuro bhendi semunhu ane makore manomwe ekuberekwa uye ndichinzwa zvisinganzwisisike zvenguva zviratidzo uye manzwi ari kupera kubva kunzvimbo dziri kure-kure. Izvo zvakandikurudzira nerudo redhiyo rwandisati ndamborasa. Vazhinji venyu muri kuverenga izvi zvingangodaro zvine chekuita nechimwe chinhu chakafanana neicho uye muchave neruzivo rwenyu rwakakonzera kufarira kwako kwekutanga.
Nekudaro mu2018, hapachina chero "mashiripiti" mune aya marudzi ezviratidzo - kunyanya kana iwe uchikwanisa kutumira pakarepo uye kugamuchira vhidhiyo vhidhiyo kubva kune rimwe divi repasi pane ruoko runotakurika ruoko!
Ini ndakanyeverwa nezvekushandurwa kwegungwa nenzira isina kujairika makore mazhinji apfuura, apo musikana wemwanakomana wangu wekurera ane makore gumi nemanomwe-wemakore akauya mumba mangu redhiyo ndokubvunza zvandaiita. Ndakatsanangura kuti ndaishandisa redhiyo kutaura pasirese uye ini ndakaedza kumunakidza nezve zvandanga ndichiita.
Akabvunza kuti chii chikuru chinhu chakatenderera pawairesi hombe chaive - zvakanditorera nguva kuti ndione kuti aireva kune huru redhiyo tuning dial!
Ndakatsanangura mberi ndokubva abvunza "Unoda chii icho? Haungodzvanya bhatani ipapo? ”
Ipapo ndipo pandakaona kuti vanhu vazhinji mazuva ano vakura vachifunga kuti redhiyo chingave chinhu chaunowana "pafoni yako" kana chimwe chinhu chine mabhatani akafanogadzirirwa anozvirongedza. Kunyangwe iyo pfungwa ye "kugadzirisa chiratidzo mukati" ikozvino yarasika kune mazhinji echizvarwa chiripo!
Tinopinza vanhu sei ipapo?
Iva wakanyanya kukosha zvimwe? Vazhinji vari pasi pemakumi mashanu (uye zvakawanda zvinopfuura makumi mashanu zvakare!) Mazuva ano akakwenenzverwa nenharembozha yavo nekubatana kweterevhizheni, vezvenhau pamwe nezvimwe zvakadaro. Ndiri ndega kufunga ichi chinhu chatingaite uye chatinofanira kusunga kufarira vanhu mune yedu hobby zvakanyanya?
Network maredhiyo anogona kubatsira…
Saka Network maRadio anouya kupi mune izvi?
Ivo vanomiririra tekinoroji nyowani yekuyambuka muchido chedu
Ivo vanoisa mukati mezvido zvevanhu zviripo (mafoni / mapiritsi nezvimwewo)
Icho chigadzirwa chakasanganiswa chakasanganiswa - chikamu foni, chikamu chemakomputa, chikamu PTT mudziyo
Vanozviita zvikuru nyore kushandisa imwe yePTT based software iyo yatovepo
Iwo ma SDR mune ese pfungwa yeechirevo
Iwo tekinoroji yezana ramakumi maviri nemasere vanhu vangangodaro vasina hanya neku "onekwa" nayo (iyi yekupedzisira pfungwa inoita kunge yakakosha kuchizvarwa chanhasi!)
… Kunyanya zvakabatanidzwa nemaapps anobatsira
Zello inzvimbo yakanaka yekutanga.
Chikamu chemagariro enhau, chikamu PTT Radio, yakaunganidza zvinotevera pasi rese. Nekwaniso yePTT imwe-kune-imwe kana imwe-kune-yakawanda, inonyanya kufarira kune vanhu vanoda kumisa mapoka kana nharaunda dzevanhu vane pfungwa dzakafanana.
MuGerman, semuenzaniso, iyo "Zello Funk" (inoshandurwa se "Radio Zello") nharaunda inoshanda senge mini-Ham-Radio inoenderana neyese!
Iwe unogona kujoina (yemahara hongu - hapana "bvunzo" kutora) unogona kukumbira callign (semuenzaniso ZF839) iyo yaunokurudzirwa kushandisa padandemutande (kunyangwe zvisiri zvekumanikidza) uye woenda.
Kune vangangoita zviuru zvishanu "vanofarira PTT", nekuda kwekuda kwemutsara uri nani, vakapinda munharaunda yeZello Funk voga uye pane mapoka masere eZello Funk ekutaura mukati.
Ava vanhu musanganiswa weHams, CB-ers, 446-ers, maTruckers, Vanamai vemba, Vashandi, mune mamwe mazwi, vanhu vakajairika vanhu veese mazera, mamiriro uye mukadzi - zvisinei ivo vanogovana kunakidzwa kwePTT kutaurirana.
Mapoka ese anochengetwa panzira neboka rakakura rakazvipira revamiriri vanonyatso tarisa maitiro emapoka; nhengo dzinogona kudzivirirwa kubva ku-tx-ing, kukandwa zvachose, asi, uye regai izvi zvinyure mukati…… ivo vanotova nechavo pasi pe-16 chiteshi!
Fungidzira izvo muHam Radio panguva ino? Ndinotya kuti makirabhu mazhinji eredhiyo aisazoziva zvekuita kana chero mwana mudiki akauya kumusangano, kana kunyange pamhepo…
Uye kune zvimwe…
Zello ane akawanda mapoka ekutaura Chirungu ayo Hams aigona kubatanidzwa nawo (pamwe asina kurongeka seGerman Zello Funk zvakadaro) izvo zvinogona kureva kuti tinogona kusangana nevasiri-Hams tichishandisa PTT comms pakarepo.
Kana pamwe mumwe munhu anogona kumisikidza yechirungu vhezheni yeZello Funk uye woona zvinoitika?
Wadii radio ipapo?
Zviripachena kuti kune kufarira kwePTT maitiro ekutaurirana asi izvi hazvisati zvichidudzira kune vatsva vanopinda kuchido chedu. Sei?
Huye mazuva ekutanga kuti uone kana paine chingave chiitiko, asi iko kuda kwekutora tekinoroji kosi uye bvunzo chimwe chipingamupinyi, zvirokwazvo. Kana iwe uchikwanisa kunakidzwa nePTT comms pasina kutora kosi uye kudzidza uye bvunzo, nei iwe usingadaro?
Kuchinjisa mhando yepamusoro yeVoIP kana RoIP comms yekutsvaira isina kusimba redhiyo masaini inogona kuoneka seimwe; ruzha rwemuno paHamu Bhendi inogona kunge iri imwe, uye izvo hazvisi kutomboenda mukubuda kwesimbi yakawanda kana waya mudenga nenyaya dzinounza…
Ndingashinga here kutaura kuti kuwedzererwa kwevarume vakura kunogonawo kusuruvara (kutaura semurume akura pachangu!) Kusave kukwezva kukuru kune vatsva vanopinda kune iyo hobby?
Nekudaro ini ndinoramba ndiine tariro uye ndichiwedzera pamusoro peizvi.
Kana vanhu vari kunyatsonakidzwa nePTT comms, ivo, muchokwadi, vasingazivi vanotora matanho avo ekutanga kune kwedu hobby. Ini ndaizoita nharo kuti tinogona kuita zvakawanda kuti ndisvike kumashure kwavari.
Zvichida isu saHams tinofanirwa kunge tichizvimisikidza sevanhu venhau venhau vanogona kuvapo PASI peInternet, pamwe NAYO? Panogona kunge paine dzimwe nzira dzatinogona kugadzirisa "kutarisa" kwedu. Zvichida iwe unogona kukurudzira vamwe muchikamu chemashoko?
Chero nzira, Network maRadio, aripo mune iri nyika yakasanganiswa, anogona, uye ini ndinotenda achadaro, ichaita basa rinobatsira kwazvo mukubvumira vanhu "kutamba radio" munzvimbo yakachengeteka uye kuona kana ichiita kufarira kwavo.
IRN yaizomiririra zvine mutsindo "nhanho inotevera", uko vatsva vaigona kudyidzana neiyo chaiyo RF link.
Ndingashinga here kuratidza ipapo, kuti patinonyanya kuita vatambi kupinda mungarava neRadio Network, ndipo patinonyanya kutora nhanho yekuenda kumapoka ari kukura e "Vanofarira PTT", uye zvakanyanya zvatingave tichifanira kuvapa?
Apa ndipo panowanikwa "wave" inotevera yeRadio Hams, ndinoshamisika?
Chinhu chimwe ndechechokwadi, havazouyi kwatiri, sezvakaita maCB-ers muma1980 - isu tichafanirwa kubuda, tichavawana uye tishamwaridzane navo, kana tichizovabatsira mune yedu huru yekutandarira!
© Kurume 2018 - Chris Rolinson G7DDN
Kana Wifi isingawanikwe, shandisa 3G, kana ingori pachena UHF
The Inrico T298s UHF iri yemasanganiswa UHF Network Radio. Iyo yakanaka nzira yekutanga neNetwork Radios. Zvirinani, kana iwe usingade iyo nyowani internet modes, unogona kuramba uchiishandisa se UHF inochengetwa.
PS - Uchishandisa network-redhiyo parutivi payo, zvinogona kupindwa muropa. Vakwegura-chikoro vanosanganisira! 🙂
Maitiro ekuisa kadhi reSd muInrico TM-7 neN5MXI
1. Bvisa zvimisikidzo zvekunze kunze kwemana ari pazasi redhiyo.
Bvisa mana epasi screws ekupedzisira. Izvi zvinosunungura pazasi PC bhodhi iyo SD kadhi slot yakaiswa pamusoro. Usabvisa SIM screws.
2. Vhura redhiyo kesi sezvinoonekwa pazasi inoratidza pasi PC bhodhi uye SD slot (mutsvuku museve).
3. Bvisa PCB yepasi zvakanyatsonaka kuitira kuti usakanganise tambo dzakasungirirwa uye tambo yerabhoni uye ugare panzvimbo yakatetepa nekadhi rakatarisana rakatarisa mudenga.
Kadhi re SD kadhi rakavhara rakasungirirwa. Slide butiro wakanangana nemuseve mutsvuku kuti uzarure uye uvhure kavha yacho.
4. Mufananidzo pazasi unoratidza SD kadhi slot yakavhurwa.
Isa kadhi reS SD pane slot nevanosangana vakatarisa pasi. Ita shuwa padivi notch pane iyo SD kadhi inowirirana kumusoro ne notch yekadhi kadhi.
5. Vhara iyovhavha uine chokwadi chekuti SD kadhi inoramba iri pachinzvimbo chakakodzera.
Svetera SD kadhi slot kavha munzira yekumuseve mutsvuku kuti ukiye panzvimbo.
6. Re-unganidza kesi uchitanga neane screws akabata pasi PC bhodhi uye zvimwe zvese zvasara screws.
Verenga zvimwe nezve Inrico TM-7
Izvo zvese nezve Kuparadzira kwaChris G7DDN
Ndichiri kugadzirira hurukuro pamusoro peNetwork Radios yekirabhu yangu yemuno muUK, zvakandibata kuti nyaya iri pamusoro peNetwork maRadio uye "yechinyakare" Ham Radio ndeyechokwadi yekuparadzira.
Ivo vedu hams kana avo vakapinda muShortwave Radio kwemakore mazhinji vanoziva dzidziso yekupararira kure kure. Masaisai enhepfenyuro anoratidza kubva kuIonosphere (kana dhizaini kuburikidza neTroposphere mune iyo VHF / UHF) uye vanopedzisira vaenda kure kure kubva kwavanotangira. (Kune dzimwe nzira dzekuparadzira futi, hongu, asi ini ndinozoshandisa idzi senge generalization)
Natural v Yakagadzirwa nevanhu
Iyo mhepo ndeyechokwadi, yechisikigo uye isu tinovimba nazvo "kuzvibata" kuti tiwane kure kure kwedu kutaura. Zve Network Network maRadio, iyo Internet ndiyo inoshambadzira svikiro, zvirinani kumagumo kwekutaurirana.
Ndiri kuona zvimwe zvakafanana pakati pemuchadenga neInternet. Iyo webhu iri, senge, inogadzirwa nemurume yekuparadzira svikiro yezviratidzo - zvinopesana neyakajairwa.
Kufanana mune zvimwe zvinokuvaraidza
Izvi zvakandiita kuti ndifunge nezve zvakafanana mune zvimwe zvinokuvaraidza.
Mukukwira matombo semuenzaniso, vanofarira vanokwira pamatombo echisikigo munzvimbo dzekunze - zvinotyisa - haundibate ndichiita izvo! Asi kune zvekare kune akawanda matombo ekukwira "madziro" mumba zvakare uye pane mifananidzo yeiyi pese pawebhu.
Chandinorova kubva pakutarisa mafoto aya, ndechekuti vanhu vari kukwira mumba vanoita kunge vari kungonakidzwa sevaya vari kukwira panze. Zviitiko zviviri izvi zvakasiyana uye zvakadaro zvakafanana.
Dombo rekunze (kunge ionosphere) nderechisikigo - iro dombo remukati (seInternet) rakagadzirwa nevanhu. Kana kumisa vanokwira vachinakidzwa vachiita kukwira kwavo! Sezvineiwo futi, zvinoita sekunge kune vazhinji vechidiki vanoita iyo "yakagadzirwa nevanhu" kukwira…
"Chaiye" Ham Radio?
Zviri nyore kuramba iyo Network Network chiitiko chese se "kwete chaiyo Ham Radio" asi ichiteerera kutenderedza, zvinoita sekunge kune vanhu vazhinji vanofarira radio (kana nhepfenyuro-senge zviitiko) pasina "kudikanwa" kwekutumira pane mamwe akasarudzika mabhendi.
Sezvatinoenderera mberi mu21st Century, ndinofunga tichaona mitsara pakati pe "zvakasarudzika zvakaparadzirwa" zviratidzo uye ne "zvakagadzirwa zvakasimudzwa" zviratidzo zvichitadza kuwedzera.
Semumwe munhu anofarira CW, HF, VHF, UHF pamwe neD-STAR uye Network Radios, ini handioni kuti nei iyoyo ingave iri nyaya, kunze kwekunge isu sevamiririri tichiita imwe.
Ngatichengetedzei zvakanaka nezve zvakapfuura zveHam Radio, pasina kudzinga matekinoroji matsva anotakurwa neakanakisa matsva ayo anoramba achiuya munzira yedu mu21st Century.
Mibvunzo, mibvunzo, mibvunzo…
Saka inis yeInternet chero CHIDZIDZO chinoshanda senge nzira yekupararira kwemasaini amateur, nekuda kwekuti inogadzirwa nevanhu, kwete simba rezvisikwa?
Izvi zvese a chityiso kuna Ham Radio sekutandara, kana iri mukana?
Mibvunzo inodenha neayo isu tinogona kungozvipindurira pachedu.
Pamwe iwo wega mubvunzo unokosha ndewekuti, urikunakidzwa here neredhiyo yako hobby, mune chero chimiro chayinotora?
© Kukadzi 2018 - Chris Rolinson G7DDN
Radio-Tone RT4 Ongororo Chikamu 1 - Ongororo & Kugadzirirwa naRingway Manchester
Ongororo inonakidza yeiyo Radio-Tone RT4 yakagadzirwa Ringway Manchester
Maitiro ekugadzirisa odhiyo kutonga paChikwata Taura 3
Iyi dzidziso inobatsira kugadzirisa kushaikwa kwehuwandu hwevhoriyamu iyo iyo Team Taura 3 yazvino vhezheni yakaunzwa kunetiweki yedu maredhiyo.